Awudingi i-SEO yeNgcali! | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 20, 2009 NgoLwesihlanu, Oktobha 17, 2014 Douglas Karr
Apho… benditshilo! Nditshilo kuba ndiyayibona yonke imali echithwe kuphuculo lweinjini yokukhangela ngamashishini amancinci ukuya kubukhulu kwaye ndicinga ukuba yiRacket. Nalu uluvo lwam ngeshishini lokwenziwa kweinjini yokukhangela:
Uninzi loPhuculo lweeNjini zoPhando luwela ngaphakathi Ukubhala umxholo omkhulu, ukutsala igunya kukunika ukuba ukuba umxholo kunye nokulandela ezona ndlela zibalulekileyo zibalulekileyo. Zonke ezi ziziseko umntu anokuzilandela- kodwa uninzi alwenzi.
Ndisabona iindawo ezininzi ezibetha imarike ezinobunzima kunye nokukhanya kokubhaliweyo, ezingasebenzisi izinto ezilula njengezihloko, izihlokwana, njl njl. Ezi ngcebiso, endizibhalileyo malunga nebhlog yam kwaye ndibona kaninzi kwezinye iiblogi ziya kufumana indawo yakho 99% yendlela.
Inyani yile: Ukuba ubhala umxholo ofanelekileyo rhoqo oquka amagama aphambili kunye namabinzana akhangelwa ngabakhangeli, indawo yakho iya kufunyanwa. Impembelelo yomxholo uya kuthi ncinane nakuphi na ukulungelelanisa ukuba nayiphi na ingcali ye-SEO inokufikelela. Yeka ukuchitha imali yakho kwaye uqale ukubhala umxholo!
Baninzi abantu abathanda ukuphikisana neemfihlo zeinjini zokukhangela kwizinto ezinje ngobude be-URL, amakhonkco aphumayo, alandelwanga, njl, njl. Njl. Kodwa badlala kuphela kwi-1%. Ngokuqinisekileyo, kwamanye amashishini, loo 1% incinci inokuba ngumahluko kwizigidi zeedola… kodwa kuwe nakum, ibhedi.
Enye imfihlo yeshishini yi-99.99% yokhuphiswano lwakho ayinalo nofifi lwento abayenzayo. Bhala umxholo ofanelekileyo, onyanzelisayo kwaye ungaphumelela umlo kukhangelo.
tags: UkuThengiswa kweMpahladiyyenze ngokwakhoindlela yokwenza seoUyenza njani into yokukhangelaenjini yokukhangela nounSEOUmcebisi we seoIngcali ye seo
I-3.24% yabasebenzisi bakaFacebook baFile
Jan 20, 2009 kwi-2: 10 AM
Kakhulu. Inkcazo yakho icace gca ukuba nengcali ibonakala ingavumi. Ndiyathemba ukuba uza kuchaza ezinye izinto ngokubaluleka okufanayo.
Jan 20, 2009 kwi-8: 37 AM
Ndiyavumelana nembono yakho yokuba inyama kunye neetapile (umxholo) zibaluleke ngakumbi kwi-gravy (i-SEO optimization), kodwa ndiyazibuza ukuba ngaba ucebisa ukuba ungazikhathazi nge-SEO iyonke…
Ndizifundile ngeenxa zonke ii-internets ukuba kukho izinto ekufuneka zenziwe ziibhlog zokwenza ngcono iiposti zazo, njengokukhetha igama eliphambili ngokusekwe kwimfuno kwaye ufefe elo gama liphambili kwisithuba ubuncinci amaxesha angama-X kodwa kungasekho amaxesha angama-XX, njl.
Ngaba uziva ngathi kusafuneka yenziwe, okanye ngaba kufuneka siyitsibe kwaye sijolise ekubhaleni i-web ye-semantic yewebhu ekugqibeleni?
Jan 20, 2009 kwi-8: 46 AM
Ukulandela ezona ndlela zilungileyo ze-SEO kufuneka. Ukuba nephepha eliyile kakuhle, ukuba nesiza esisebenzisa izixhobo ezinje ngeemephu zokubonisa iiinjini zokukhangela apho ujonge khona kwaye yintoni ebalulekileyo, njl.
Baninzi kakhulu abantu, ngakumbi ii-SEO "iingcali" eziphikisana nemiba ye-SEO endaweni yokucebisa abathengi babo ukuba bafumane iqonga elihle… kwaye babhale kuyo. Inkqubo elungileyo yolawulo lomxholo iya kubandakanya ezona ndlela zilungileyo, okanye inani leeplagi / ezongezelelweyo ezinokunceda.
Uninzi lwamashishini amancinci ukuya kubukhulu buphakathi bachitha ixesha kunye nemali kwi-1% endaweni yokusebenza apho banokwenza khona umahluko!
Jan 20, 2009 kwi-9: 31 AM
Chris, akukho fomula ikhethekileyo yamaxesha e-X. Inzima kakhulu kunaleyo kwaye i-SEOs enamava ayilihoyi ngokupheleleyo igama eliphambili kodwa kufuneka uqiniseke ukuba usebenzisa amabinzana aphambili kunye nokwahluka kwabo kwizithuba zakho.
Ukukhetha amagama aphambili Athandwayo KANYE ekujoliswe kuwo kubalulekile kodwa ndicinga ukuba oku kuwela "umxholo" kwinxalenye yomzobo kwisithuba sikaDoug, hayi icandelo leNgcali le-SEO. Ukuba i-SEO iyinxalenye yesicwangciso sakho sokubloga, kunokuba amagama akhethiweyo abaluleke kakhulu.
Unyanisile uJames-yile nto kanye ndiyithethayo ngokubhala umxholo ofanelekileyo. Awudingi yingcali ukufezekisa oku.
Jan 20, 2009 kwi-9: 28 AM
Njenge-SEO "ingcali" kufuneka ndenze ingxelo apha. Ukuba ukhangela "iwijethi" kuGoogle ngoku, kukho iziphumo eziyi-128,000,000.
Zili-10 kuphela ezibonisiweyo kwiphepha lokuqala kwaye yi-1 kuphela kwindawo ephezulu. I-10 ingaphantsi kakhulu kwe-1% yeziphumo.
Ngelixa lo ngumzekelo ogqithileyo, kwaye mna ngelixa ndivuma isiseko sesithuba sikaDoug, gcinani engqondweni ukuba kumashishini akhuphisanayo i-1% kaDoug iyasinda ukuze ibe ngumahluko phakathi kwendawo ephezulu okanye indawo yephepha lesithathu. Kwaye kwityala likaDoug ukhankanya ukuba ngamanye amaxesha kunokuba njalo, ndimile nje kubazalwana bam be-SEO kancinci -
Umxholo kunye ne-backlinks sisiseko se-SEO. Gxila kubo ude ukwandise ngokupheleleyo ukusebenza kwabo.
Jan 20, 2009 kwi-10: 01 AM
Enkosi ngokubhala oku - kulungile ukubona ishishini elicacisa ngokwaneleyo ukuba ungathi "awudingi yingcali" ngelixa uthetha kwisitulo sobuchwephesha. Ewe, ngumsebenzi onzima, kodwa yile nto nje eyenzekayo.
Jan 20, 2009 kwi-10: 15 AM
Andivumelani neziqinisekiso zakho eziphambili. Ndisebenza kwi-SEO kwaye ngumsebenzi endiwuthandayo. I-SEO yinto ebalulekileyo yophuhliso lwewebhu engenakuhoywa. Ingxaki kukuba, amaxesha ngamaxesha, ayikhathalelwa ngenxa yoyilo lweflash kunye nokuphunyezwa okungalunganga.
Jonga ngale ndlela. Iinkampani AKUFUNI ukucinga malunga ne-SEO. Bangathanda ukuhlawula omnye umntu ukuba acinge ngayo kwaye baqiniseke ukuba bayenza ngokuchanekileyo. Njengokuba bekhetha ukuhlawula omnye umntu ukuba acinge malunga noyilo. Ingxaki ephambili kukuba uninzi lwabayili abayicingi malunga ne-SEO.
Kutheni le nto umntu ehlawulela iqonga lebhlog yeCompendium, xa kukho iindlela ezininzi zasimahla ezisebenza ngokufanayo? Ayithathi lukhulu ukuphosa iWindowsPress kwiseva yokuzenzela kwaye uqale ukubhloga. Kodwa abantu bakubhatalela ubuchwephesha bakho, kwaye yile nto iinkampani ezihlawula ngayo xa zithenga uthethwano lwe-SEO.
Andizukuphikisa ukuba zininzi ii-SEO's ezingazi nto phaya, kodwa uza kuqhuba uye nakweyiphi na intsimi. Inyani yento yile, ndiyayazi i-SEO kwaye ndenza owona msebenzi mhle ndinokuwenza kubaxumi.
Ke, iinkampani zifuna iingcali ze-SEO, ukuba azinakukhathazwa ukuba zifunde nge-SEO ngokwazo.
UJonathan-ndicinga ukuba wenza ityala lam apha! Isizathu sokuba umntu afune ukubeka ibhlog yakhe kwiqonga elifana neCompendium kungenxa yokuba kungafuneki bakhathazeke nge-SEO!
Ndiyakholelwa ukuba kukho ezinye iinkampani ezisemfazweni ye-4 ephezulu kwaye ndicacisa ukuba kukho i-1% (okanye ngaphantsi) ekufuneka iqhakamshelane nengcali ye-SEO ukubanceda.
Iposti yam iyinyani malunga ne-avareji yenkampani… uninzi lwazo kufuneka lufumane iqonga elilungileyo elisebenzisa ezona ndlela zibalaseleyo ze-SEO, bhala umxholo ofanelekileyo, kwaye uyenze inyanzelise ukutsalela ingqalelo. Oko akufuneki 'yingcali'.
Ngaphandle kokuba uzinikele kwi-100% yejini yokukhangela kufuneka uqeshe i-SEO. Ithiyori yokusebenza kweinjini yokukhangela ilula kodwa eneneni ukubeka iwebhusayithi kuthatha umsebenzi omninzi kunye nolwazi.
Iposti enkulu! Ndikufundile ibhlog yakho ngokwaneleyo ukuba wazi ukuba uyonwabele i-back-n-out elungileyo, ke ngoku iya:
Ndicinga ukuba uhlupheka "kwisiqalekiso soLwazi". Isiqalekiso soLwazi siqheleke kakhulu kubantu bobuchwephesha (nam ndiyabandezeleka), kwaye kwenzeka xa belibele ukuba kwakunjani ekuqaleni xa babengazi nto.
Abantu abanamashishini amancinci webhusayithi kufuneka bazi izinto ezininzi ukuba banethemba lokwenza kakuhle kwiinjini zokukhangela.
Ufunde konke malunga ne-SEO njengoko uyakhayo le ndawo, kodwa yayilixesha elidlulileyo kwaye ngoku kunzima ukukhumbula zonke izinto ozifundileyo apha endleleni.
Nanku umzekelo omnye nje omfutshane wento oyifundileyo "kuYobhi" kunye nendawo yakho:
Xa ususa indawo yakho
Le ntshukumo ifuna ukuba:
Faka kwaye uqonde izixhobo zikaGoogle zohlalutyo kunye nezixhobo ze-webmaster (ukuqiniseka ukuba amakhonkco ahamba ngaphezulu, kunye ne-trafic),
Sebenzisa i-301 iqondisa kwakhona (kuwe .htaccess ifayile)
Yenza ifayile yeerobhothi.txt (eyakho ayibalulekanga kwaye ayizenzeki)
Thintela umxholo ophindaphindiweyo kunye nemicimbi yokuchazwa kwegama
… Nezinye izinto ezininzi apha endleleni.
Ukuhamba kwesiza sakho akuyi kuba ngumsebenzi olula kumntu ongeyongcali, kwaye khumbula, ngumzekelo omnye wolwazi oluluncedo owaluthathayo endleleni!
Ubeka kakuhle kakhulu kwimigqaliselo efana ne "teknoloji yokuthengisa" kuba ubhala kakuhle, kwaye ngenxa yokuba uyazi kakhulu malunga ne-SEO.
Ke, okoko nje sibandakanya le miba yezobuchwephesha ye-SEO kwiiNkqubo eziPhambili ndiyavuma ngokupheleleyo.
Ndidiniwe! Ewe undazi kakuhle, Pat!
Kuyinyani ukuba ngokuqinisekileyo ndiyabamba kwaye ndiyayijika indawo yam ye-SEO kancinci. Nangona kunjalo, inqaku lam elingasentla alijolise kum, lijolise kwinkampani ephakathi kwi-net. I-tweak kunye ne-tweak kunye ne-tweak ikakhulu ngenxa yokuba ndiyinto encinci yegeek.
Ukunyaniseka konke, kusenokwenzeka ukuba ndenze owona monakalo ungaphezulu kunokuhamba ixesha elide.
Inyaniso iya kuxelwa, ndiye ndavuma ukuba bendijolise kumxholo wam ngcono kwaye, mhlawumbi, ndakhe iiblogi ezininzi- ukuba ndiza kufumana ingqalelo ngakumbi. Umxholo ofanelekileyo, umxholo rhoqo… uphumelela ngalo lonke ixesha.
Enkosi ngengcaciso enkulu!
Jan 21, 2009 kwi-3: 55 AM
Uphinde ubethe isikhonkwane entloko kwakhona. Ingxaki iya isiba mandundu kwibala lezorhwebo elincinci ukuya kubukhulu obuphakathi kuba ulwazi lwabo lwewebhu kunye neewebhusayithi lincinci kwaye bayanyanzelwa ukuba baxhomekeke kubacebisi ukuba babhale baze bafake umxholo wabo. Bayiyo inceba yabacebisi bewebhu kwaye bayityhala i-SEO kwaye amashishini amancinci ayayithenga. Kananjalo uninzi lwabacebisi ababakhela iziza aluyonto ngaphandle kwabaqulunqi abanomdla kuphela kwindlela yobugcisa isiza esijongeka ngayo kuba leyo yindlela abacinga ngayo kunye nezinto abaziqondayo.
UDoug, ingxelo yakho "Bhala umxholo ofanelekileyo, onyanzelisayo kwaye ungaphumelela umlo ekukhangelo" ulungile kwimali. Isifundo endisifundileyo: khetha isihloko osithandayo, bhala rhoqo kwaye unxibelelane nabanye. Emva kancinci ngaphezulu konyaka kuyaqala ukusebenza. Ewe ewe, kwaye isixhobo sokubala esiCwangcisiweyo sibe luncedo olukhulu. -UMichael
Jan 27, 2009 kwi-8: 26 AM
Unyanisile ukuba impumelelo yewebhusayithi ekubhaliseni i-hetting iyakubonwa kumxholo nakwi-backlinks. Nangona kunjalo, awungekhe uzilahle ngokupheleleyo iingcali ze-SEO. Eyona nto ibizwa ngokuba ziingcali ze-SEO ziyayazi ukuba mabayenze ntoni kwiwebhusayithi yakho ukuyenza ukuba ibekwe kwindawo ephezulu kwiphepha leGoogle.